IJamaica neSaudi Arabia zisayina uxwebhu lwenjongo yokunyusa unxibelelwano lomoya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » IJamaica neSaudi Arabia zisayina uxwebhu lwenjongo yokunyusa unxibelelwano lomoya
uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba ezahlukeneyo
Emva kwempumelelo yentlanganiso yamacala amabini, uMphathiswa wezoKhenketho eJamaica, Mhlonishwa. U-Edmund Bartlett, (ngasekhohlo) wanika uBukumkani buka-Mphathiswa Wezokhenketho wase-Saudi Arabia, oHloniphekileyo u-Ahmed Al Khateeb, ukhenketho lwe-Kingston-based Global Tourism Resilience and Crisis Management Centre. Ngexesha lentlanganiso, iJamaica kunye ne-Kingdom of Saudi Arabia bavumile ukutyikitya uxwebhu lwenjongo, ukuphucula unxibelelwano lomoya phakathi kwe-Middle East kunye neCaribbean.
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica, Hon. U-Edmund Bartlett uxele ukuba iJamaica kunye ne-Kingdom of Saudi Arabia bavumile ukutyikitya uxwebhu lwenjongo, ukunceda ukonyusa unxibelelwano lomoya phakathi kwe-Middle East kunye neCaribbean.
Uthotho lweentlanganiso bezisenzeka malunga neKhomishini yeNgingqi ye-UNWTO yentlanganiso yaseMelika ebibanjelwe eJamaica.
Umphathiswa uBartlett uthe amalungiselelo eendawo ezininzi abaluleke kakhulu kuphuhliso lwezokhenketho kwingingqi njengoko iyindlela entsha kule ndawo ukuqhuba unxibelelwano kwihlabathi jikelele.
Ingxoxo malunga nolu lungiselelo kulindeleke ukuba iqhubeke kwiintsuku ezimbalwa ezizayo.
UMphathiswa wenze isibhengezo kulandela uthotho lweentlanganiso noMongameli oHloniphekileyo u-Ahmed Al Khateeb, uMphathiswa Wezokhenketho wase-Saudi Arabia, okwangoku oseJamaica kwintlanganiso yama-66 yeKhomishini yeNgingqi ye-UNWTO yamazwe aseMelika. Intlanganiso ibibandakanya aBaphathiswa bezoKhenketho abaliqela abajoyine iingxoxo phantse.
“Sithethe ngokudityaniswa komoya kunye nendlela yokuqhagamshela uMbindi Mpuma, imakethi yaseAsia, kunye neendawo ezikuloo cala lehlabathi ukuzimanya nathi ngeenqwelo moya ezinkulu ezikwezo ndawo. Ingakumbi i-Etihad, i-Emirates kunye neenqwelo moya zaseSaudi, ”utshilo uBartlett.
Isivumelwano esiphuma kuloo nto kukuba uMphathiswa u-Al Khateeb uza kuzisa etafileni, abo bangamaqabane aphambili, ngelixa ndiza kuba noxanduva lokudibanisa namazwe asebenzisana nathi kwisakhelo sezokhenketho kwiindawo ezininzi, ukwenza ukuba ulungiselelo lweHub neSpoke ukuze izithuthi zihambe zisuka kuMbindi Mpuma zize kule ndawo yethu kwaye zisasazwe kwilizwe elinye, ”wongeze watsho.
Ubuye wachaza ukuba amalungiselelo eendawo ezininzi abaluleke kakhulu kuphuhliso lwezokhenketho kwingingqi njengoko “kuyindlela entsha kule ndawo ukuqhuba unxibelelwano kwihlabathi liphela, kodwa ngakumbi ukwandisa intengiso ukwenza ubunzima obubalulekileyo kufuneka sitsale iinqwelo-moya ezikhulu kunye nabanini babakhenkethi ukuba babe nomdla kuthi kwaye babe nentshukumo eyomeleleyo yokhenketho kwindawo yethu. ”
UBartlett uqaphele ukuba eli lungiselelo liza kutshintsha umdlalo kwiCaribbean njengoko izakuvumela iimarike ezintsha ukuba zinxibelelane ngqo nommandla, ngaloo ndlela zonyusa umvuzo, ngakumbi kumashishini amancinci naphakathi.
“Kuthi lo ngumdlalo otshintsha umdlalo, kuba amazwe amancinci afana Jameyikha soze ubenamandla okuba neenqwelomoya ezinkulu ezinjengeQatar kunye ne-Emirates eziza kuthi zivela ngqo kwiinqwelomoya. Nangona kunjalo, singaxhamla kwezi nkampani zeenqwelo moya ziza kwindawo yaseCaribbean - ezifika apha eJamaica kodwa zisasazwe nakwamanye amazwe eCaribbean, ”ucacisile.
Ingxoxo malunga nolu lungiselelo kulindeleke ukuba iqhubeke kwiintsuku ezimbalwa ezizayo, ngethemba lememorandam yokuqonda egqityiweyo.
Umphathiswa u-Al Khateeb, uvakalise umbulelo ngokumenyelwa eJamaicaica ukuba ithathe inxaxheba kwiingxoxo eziza kunceda ekomelezeni unxibelelwano phakathi kwe-Middle East kunye neCaribbean.
“Sixoxe noogxa bam, imixholo ebaluleke kakhulu kwaye sixhasa ukudala iibhlorho phakathi koMbindi Mpuma neCaribbean. Ndiyabulela uMphathiswa uBartlett ngeli thuba kwaye ndijonge phambili ekwandiseni iqumrhu ngokwandisa uMbindi Mpuma kunye neCaribbean, utshilo u-Al Khateeb.
Ngexesha lentlanganiso, baxoxe nangeminye imimandla yokusebenzisana okunokwenzeka, kubandakanya nophuhliso lwabasebenzi, ukhenketho loluntu kunye nokomeleza ukwakha kulo mmandla.
“Enye yeendawo ezingundoqo esithe saxoxa ngazo kukuphuhlisa ukomelela nolawulo lweengxaki, kunye nozinzo njengeentsika ezibalulekileyo ekufuneka kubuyiselwe kuzo ukhenketho. Kodwa ngakumbi, ukubaluleka kokwakha amandla ngaphakathi kwamazwe anokhenketho njengomqhubi woqoqosho lwawo-amazwe angenazibonelelo zibuthathaka kwaye asesichengeni sokuphazamiseka. Siza kubona intsebenziswano ekwakhiweni kweziko lokomelela apha eJamaica nakwiziko lokomelela eliseSaudi Arabia, utshilo uBartlett.
Umphathiswa u-Al Khateeb wabelane ngezimvo ezifanayo ngokubaluleka kokomelela nokwakha uzinzo, kwikamva leshishini.
“Sonke siyazi ukuba ukhenketho lumele i-10% ye-GDP yomhlaba phambi kwengxaki kunye ne-10% yemisebenzi yehlabathi. Ngelishwa, eli shishini labethwa kanobom ngulo bhubhani, kwaye saphulukana kakhulu ne2020 kwaye ngoku ngesitofu sokuvula kunye nokuvulwa kwamazwe amaninzi, saqala ingxoxo malunga nokuba umhlaba uzakujongeka njani kwixesha elizayo kwaye saqala ukucwangcisela iposti- COVID nokufunda kwimiceli mngeni, ”utshilo.
"Ke, uzinzo sisihloko esibaluleke kakhulu. Sifuna ukudala ukomelela ngakumbi kwixa elizayo kunye nomzi-mveliso ozinzileyo - ohlonipha indalo nenkcubeko, ”wongeze watsho u-Al Khateeb.
Iindaba ezingakumbi ngeJamaica
Imibutho yezokhenketho ingakhuthaza njani ...
Kulungile kwiRyanair, iWizz Air, i-EasyJet, iVolotea ...
I-United Airlines icime abasebenzi abangama-593 ngokwala ...
IRoma ineBhulorho eNtsha: Iprojekthi engagqitywanga ye ...
Iidolophu ezili-10 eziphambili zomculo kwihlabathi
I-WestJet ixhasa ugonyo olunyanzelekileyo lwenqwelomoya ...
I-2021 Honours ye-IGLTA yama-37 yeNgqungquthela yeHlabathi ibhengeziwe
I-IMEX America ijonge kwikamva ngenjongo kunye ...
Ukujonga kwe-UFO: Iindawo ezigqibeleleyo zokufumana into engaziwayo ...
Ngamatyala amatsha e-COVID-19 ezantsi, iBali inokuphinda ivuleke ...
Kwiintangatye: Kuqhambuke umlilo omkhulu kwisikhululo senqwelomoya saseKabul
ILufthansa igqiba ngempumelelo ukugqitywa ...
Ukuhamba ngenqwelomoya ngaphandle kweLifthansa
UMphathiswa waseSeychelles uncoma isikhokelo sabakhenkethi ...
Inqwelo moya entsha phakathi kweSiqithi iToronto kunye neOttawa emoyeni ...
I-Jamaica yamkela isigidi se-1 seendwendwe okoko kwaqala ...
I-Airways yoMzantsi Afrika ibuyela esibhakabhakeni nge-23 kaSeptemba
Dibana noMary Rhodes, iHorha yoKhenketho entsha evela eGuam, e-USA
Ukunciphisa amaXabiso okuThengiswa kweeNkonzo kwiAerospace kunye ...
Abantu baseKhanada bafuna ukuya phesheya
Iimaski, iLederhosen, kunye nebhiya ok kwi-Air Canada entsha ...
IAer Lingus iQhubeka neeNdiza zaseDublin ezivela kwisikhululo senqwelomoya saseBudapest
Ithemba lokubhabha ukusuka e-Edelweiss kuKhenketho lwaseTanzania ...
U-Air Astana ufumana inqwelo moya yakhe yesithandathu yeAirbus A321LR